Linux kernel sosi kodhi inoratidza zvimwe zvakavanzika zve AMD Zen | Linux Vakapindwa muropa
Imwe nguva yapfuura, nhau dzakaburitswa nezve zvimwe zvinoratidza kushanda kweiyo AMD Zen michina nekutenda kodhi yakapihwa muLinux kernel kuitsigira. Uye ndezvekuti Zen iri kumutsa kufarira kukuru nekuti kubva ku AMD vaita simba rinopfuura revanhu, vachibvisa mapurojekiti ese avakange vakaronga nekutarisa kwavo paZen, vachidzidza kubva mukukanganisa kwema microarchitecture apfuura. Parizvino, zvinofungidzirwa kuti ine 40% yekuvandudza muIPS ichienzaniswa neyazvino microarchitecture.
AMD ine mupfungwa yekudzokera kune zvayaive uye kumira kuIntel uye dzosera chikamu chemusika wenguva dzayo dzakanakisa. Kune izvo, shamwari ine simba kwazvo yakatsvakwa, Samsung, mafekitori ayo ndiwo epamberi uye achapa iyo 14nm FinFET yekugadzira tekinoroji (chimwe chinhu icho Intel yanga ichitadza nguva pfupi yadarika uye yakamanikidzwa kunonoka uye kumisa mapurojekiti nekuda kwematambudziko nekugadzira kwayo. tekinoroji). Pamusoro pezvo, AMD yakaunganidza dzimwe pfungwa dzinopisa zvekuti Lisa Su akadzokera kukambani yakasvibira mushure mekuvarasikirwa munguva yakapfuura, kuwedzera kune vamwe vepamusoro-tier nyanzvi.
Iyo kambani yakagadziriswa Uye pachinzvimbo chekushanda zvakapetwa kagumi saizi yayo chaiyo, sepakutanga, ikozvino inoshanda sebhizinesi diki uye rinokurumidza. Uye pfungwa dzandinotaura dzinorema zvakanyanya, saRaja Koduri, nyanzvi yeGPU yakasiya AMD kuApple uye zvino yadzoka. Mark Papermaster akashandawo kuApple, IBM uye PA Semi, achishanda pamapurojekiti akadai sePowerPC microprocessor kana SIMBA rine simba, iye zvino ajoinha AMD. Asi iyo icing pekeke ndiJim Keller (mazuva mashoma apfuura akatorwa naElon Musk weTesla Motor), uyo akaendawo kuApple kunotungamira iyo ARM Ax Series SoCs uye kune vanhu vashoma vanoziva zvakawanda nezve yepamusoro-inoshanda machipisi Keller.
Ndosaka Zen ichifanirwa kunge iri kubudirira uye ndezvekuti ikozvino taona data kubva kumakumi matatu nemaviri machena achasvika Zen, senge iyo codename Zeppelin mumessage "AMD Zeppelin (Mhuri 17h, Muenzaniso 00h) iwe unounza rairo yakagadziriswa yekuita counter iyo yakaratidzirwa neCPUID.8000_0008H: EBX . Uye yakatsaurwa Mirayiridzo Yekurega Rejista (MSR 0xC000_000E9) zvinowedzera kamwechete pamirairo yese yakasiya basa.«. Uye chigamba chinotevera chakapihwa iyo Linux kernel, uko "core_complex" inoonekwa uye inogona kureva AMD's Compute Unit:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Linux kernel sosi kodhi inoratidza zvimwe zvakavanzika zve AMD Zen